Monday August 10, 2020 - 11:23:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kooxo Xagjirayaal Islaam naceybku ku fogaaday ayaa weeraray Masjid ay muslimiintu leeyihiin iyo qabuuro ay ku aasanyihiin dad muslimiin ah.
Markaz qaabilsan dabagalka Islaam naceybka ka jira wadamada reergalbeedka ayaa soo wariyay in kooxo cunsuriyiin ah ay maalintii sabtiga weerareen masjid kuyaal magaalada Liyoon.
Baraha bulshada ayaa lagu faafiyay muuqaal muujinayay burbur xooggan oo gaaray masjidka Cumar ee magaalada Liyoon, gaalada cunsuriyiinta ah ee weerarka qaaday ayaa gubay masjidka iyo kutubihii dhaxyiillay.
Mid kamida kooxaha cunsuriyiinta ah ayaa dab ku qabtay mixraabka masjidka iyo maktabad ku dhax tiillay, wararka ayaa intaas ku daraya in gaalo xagjirayaal ah ay isku dayeen in ay faagaan qabuuro dad muslimiin ah ku aasnaayeen balse markii dambe ay goobta gaareen ciidamo boolis ah.
Warbixinada ayaa sheegaya in weerarada cunsuriyadeed ee ka dhanka ah muslimiinta ay sare ukaceen gudaha wadanka Faransiiska, sanaddii 2019 ayaa lasoo calaamadeeyay kor ukac dhan 54% marka laga hadlayo weeraradii ka dhanka ahaa muslimiinta ee Faransiiska ka dhacay.
Sanaddii 2008 ayay muslimiinta Faransiiska lakulmeen weeraradii ugu badnaa waxaana lagubay dhowr masjid iyadoo lafaagay 148 qabri.
Faransiiska waxaa kunool jaaliyadda muslimiinta ugu badan qaaradda Yurub waxayna tiradoodu gaarayaan 6 malyan, xukuumadda Paris ayaa qudheedu qeyb ka ah cadaadiska lagu hayo ahlu towxiidka waxayna soo saartay go'aano ciriiri gelinaya xuriyadda cibaadada muslimiinta sida iyadoo dumarka muslimaadka ah ka mamnuucday xirashada xijaabka sharciga ah iyo niqaabka.